घर » अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक समाचार » स्विजरल्याण्ड यात्रा समाचार » स्विजरल्याण्ड: सुन्दर र जटिल
केहि अराजक रेल र बस सवारी पछि, हामी Lausanne देखि Lucerne को लागी। यद्यपि हामीले ट्याक्सी चालकले हामीलाई गलत ठाउँमा पु taking्याएको कारण पहिलो ट्रेन हराइरहेका थियौं, तर हामीले यसलाई एउटा साहसिक कार्यमा परिवर्तन गरेका थियौं, र मलाई गर्व छ कि फ्रान्सेली भाषामा मेरो आफ्नै झगडामा लाग्न सक्छु!
यात्रा चुनौतिहरूको बाबजुद, हामीले यसलाई हाम्रो होटेलमा बनायौं, तालको माथिल्लो ताल। यसमा कुनै शंका छैन स्विट्जरल्याण्ड दुवै सुन्दर र जटिल छ। देशका जर्मन, फ्रेन्च र इटालियन भागहरू एक अर्कासँग मुश्किलसँग कुराकानी गर्छन् र पुलिसले अनुवादकहरूलाई उनीहरूको पुलिस स्टेशनमा राख्छन् ताकि देशका अन्य भागहरूसँग कुराकानी गर्न सकून्। अर्को तर्फ, दृश्य दृश्यात्मक छ, सेवा दोषहीन, र लगभग सबै चीजको मूल्य ब्रिटिश र फ्रान्सेली चकित गर्न को रूप मा यति उच्च छ! एउटा राम्रो कुरा भनेको स्थानीय बस सेवा पर्यटकहरूको लागि निःशुल्क हो।
रेलमा, यहाँ मैले बासेलको लागि संकेतहरू देखे। अधिकांश व्यक्तिहरूका लागि बासेल केवल अर्को स्विस शहरको नाम हो, तर हिजो पनि इजरायलको स्वतन्त्रता दिवस थियो र बाजेलमा पहिलो सियोनवादी कांग्रेस भएको थियो। यहूदी राष्ट्रलाई घर फर्काउन खोज्ने आदर्शवादीहरूको उपस्थितिमा तिनीहरू पागलपनको निकट मानिन्थ्यो। आज, तिनीहरूको दर्शन बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो सफलताको कहानी हो। यो यहाँ स्विजरल्याण्ड मा थियो जहाँ यो सबै शुरू भयो। यदि म योम हाट्समोटमा इजरायलमा हुन सक्दिन भने, यो दोस्रो उत्तम हो।
धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई भने कि हामीले भ्रमण गरेका तीन शहरहरूमध्ये लुसर्न सबैभन्दा सुन्दर छ। म सहमत छु, शहर भव्य छ। त्यहाँ शास्त्रीय यूरोपीय वास्तुकलाको मिश्रण छ जुन दुबै जलीय र हिमालको भारी स्पर्शको साथ छ। भवनहरू आधुनिक, पुरानो, आर्ट डेको, वा एक परीकथाको सम्झना गराउने हुन सक्छ। यद्यपि सहर पर्यटकहरूले भरिएको छ, हामी सहित, स्विस सडकमा अन्तर्मुखी छन्, तर एक पटक तपाईं तिनीहरूलाई फर्कन मद्दत गर्न अविश्वसनीय रूपमा तयार छन् र तपाइँलाई मद्दत चाहिन्छ भनेर स्पष्ट पार्नुहोस्।
त्यसोभए, त्यहाँ धेरै हाँसोहरू छैनन् तर अपरिचित व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने ठूलो सम्झौता छ, र एकपटक बरफ टूट्यो भने, त्यहाँ ठूलो तातो स्नेह हुन्छ। यहाँ रेस्टुरेन्ट मूल्य खगोलीय छन्। हामीले गत रात एउटा अद्भुत स्थानीय इटालियन रेस्टुरेन्ट भेट्टायौं, एक आकर्षक प्लाजामा टाँकिएको छ, जहाँ साधारण खाना पनि विवादास्पद मुल्यहरूको लागि लायक थियो।